ဒေလီနှင့်အမျှခုနှစ်တွင်တုန်ခါ 5.5 ပြင်းအားငလျင် Uttarakhand Hits | delhi မြေငလျင်ယနေ့ | Uttarakhand ငလျင်ယနေ့
Uttarakhand ရဲ့ Rudraprayag ခရိုင်အတွင်းရှိငလျင်ဗဟိုချက်မှာ, အနက် 30 ကီလိုမီတာ
ခိုင်မာတဲ့တုန်တုန်ယင်ယင်ဒေလီမှာရှိတဲ့ခံစားခဲ့ရ, Gurgaon နှင့် Ghaziabad
ခိုင်မာတဲ့တုန်တုန်ယင်ယင်အတွက်ခံစားခဲ့ရခဲ့ကြသည် ဒေလီနှင့်အမျိုးသား Capital ကိုတိုင်းဒေသကြီး တစ်ဦးပြီးနောက်စက္ကန့်အနည်းငယ်အဘို့ဤညနပေိုငျး 5.5 ပြင်းအားငလျင် Uttarakhand လှုပ်ခတ်. အလယ်အလတ်ပြင်းထန်မှုငလျင်၏ဗဟိုအစီရင်ခံခဲ့သည် 121 Dehradun ၏ကီလိုမီတာအရှေ့, Uttarakhand ရဲ့ Rudraprayag ခရိုင်အတွင်းရှိ.
အဆိုပါငလျင်မှာလှုပ်ခတ် 8:49 ညနေ, အနက်မှာ 30 ကီလိုမီတာ, အိန္ဒိယမိုးလေဝသဦးစီးဌာနသည်နှင့်အညီ.
"ငလျင်ဗဟိုချက်မှာ Uttarakhand ၌တည်ရှိ၏, ဒေလီနှင့် nCr အတွက်ခံစားခဲ့ရသည့်တုန်တုန်ယင်ယင်အဆိုပါ Impulses သတင်းပို့ကြသည်,Seismology များအတွက် Center မှာ "တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး, အိန္ဒိယမိုးလေဝသဦးစီးဌာန (IMD), ကိုပြောသည်သတင်းဌာန IANS.
ဒါဟာအတိတ်ကာလ Uttarakhand အတွက်ဒုတိယငလျင်ဖြစ်ပါသည် 24 နာရီ. အင်္ဂါနေ့မှာ, တစ်ဦး 3.3 ပြင်းအားငလျင်ပြည်နယ်အစီရင်ခံခဲ့သည်. တောင်ပေါ်ပြည်နယ်, ဟိမဝန္တာဒေသ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, မြင့်မားသောငလျင်ဇုန်အောက်မှာကျရောက်.
တုန်ခါယနေ့လည်း Uttarakhand နှင့် Haryana နှင့် Uttar Pradesh ပြည်နယ်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် Roorkee နှင့် Dehradun အတွက်ခံစားခဲ့ရခဲ့ကြသည်. Dehradun အတွက်, များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်တုန်တုန်ယင်ယင်ပြီးနောက်၎င်းတို့၏အဆောက်အဦထဲကတိုးမြှင်, အစီရင်ခံသတင်းအေဂျင်စီ ANI.
ဒေလီကနေလူအတော်များများ, Gurgaon နှင့် Ghaziabad သူတို့ကငလျင်တုန်တုန်ယင်ယင်ခံစားခဲ့ရရုံပြီးနောက် Twitter ကိုယူ.
"ငါသည် #Delhi ၌ဤ #earthquake ခံစားခဲ့ရ. ဒါဟာအဆက်မပြတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအဘို့အလှုပ်ခဲ့သည်,"တစ်ဦးက Twitter အသုံးပြုသူ Barny Tweet လုပ်ခဲ့.
အိန္ဒိယ6ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ငလျင်ယနေ့တွင်, 2017 | ပမာဏ 5.8 /6ငလျင်ဒေလီတာမျိုး,
အိန္ဒိယမှာတော့ငလျင်ယနေ့တွင် : တုန်ခါဒေလီမှာတော့ခံစားခဲ့, မြောက်အိန္ဒိယ
အိန္ဒိယပြင်းအား6ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ငလျင်ယနေ့တွင်,2017 : 6.0
ဘတ်: ထိပ်တန်း6Tips On How To Write The Best Essay
တုန်ခါဒေလီမှာရှိတဲ့ခံစားခဲ့ရခဲ့ကြသည်, တစ်ငလျင်အဖြစ်အမျိုးသား Capital ကိုတိုင်းဒေသကြီးနှင့်မြောက်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံယနေ့ညနေပိုင်းတွင် 6.0 ပြင်းအား Uttarakhand လှုပ်ခတ်.
· Jammu အတွက်ငလျင်ယနေ့တွင် & ကက်ရှမီးယား
· Haryana အတွက်ငလျင်ယနေ့တွင်
· Chandigarh အတွက်ငလျင်ယနေ့တွင်
· Ludhiana အတွက်ငလျင်ယနေ့တွင်
· Amritsar အတွက်ငလျင်ယနေ့တွင်
· Kanpur အတွက်ငလျင်ယနေ့တွင်
· Dehradun အတွက်ငလျင်ယနေ့တွင်
· Himachal Pradesh ပြည်နယ်အတွင်းရှိငလျင်ယနေ့တွင်
· Simla အတွက်ငလျင်ယနေ့တွင်
· chandigarh ယနေ့ earthquack6december 2017 (3)
· အပေါ်အိန္ဒိယမှာမြေငလျင်6ကြိမ်မြောက် decemberurary (2)
· ငလျင်6december 2017 (2)
· uttarakhand မြေငလျင်ယနေ့6december 2017 (2)
· chd တွင်ငလျင်6december 2017 (2)
· Ludhiana အတွက် bhukamp 06 ဒီဇင်ဘာလ 17 (2)
· ငလျင်သည်ယနေ့အချိန်တွင် 10:35 ညနေ (2)
· chandigarh အတွက်မြေငလျင်တနင်္လာနေ့6december 2017 (1)
· chandigarh ဒီဇင်ဘာလ၌ငလျင် 2017 (1)
· chandigarh 6december အတွက်မြေငလျင် 2017 (1)
· Chandigarh အတွက်မြေငလျင်6december 2017 (1)
· chandigarh အတွက်မြေငလျင်6december (1)
· မြေငလျင် delhi ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ62017 (1)
· မြေငလျင် delhi 6december 2017 (1)
· မြေငလျင် chandigarh6december 2017 (1)
· အိန္ဒိယမှာမြေငလျင်ဗဟိုချက်6december (1)
· ငလျင်6december 2017 အိန္ဒိယမှာ (1)
· Bhukamp ဒေလီ 6december 2017 (1)
· မြေငလျင် 7th ဒီဇင်ဘာလအပေါ်မကြာသေးမီကတို့သည် လာ. ခဲ့ပါ 2017 (1)
· ငလျင်6ဒီဇင်ဘာလအပေါ်မကြာသေးမီကတို့သည် လာ. ခဲ့ပါ 2017 (1)
ထိပ်တန်း 8 အိန္ဒိယတွင်အကျိုးအမြတ်လစာနှင့်အတူအလုပ်ရှာဖွေရေး Options ကို